Deeqda Sare ee 8 ee Daraasaadka Fiqiga ee Kuuriya 2022
Deeqda ugu sarreysa 8 ee Daraasaadka Fiqiga ee Kuuriya
Ma rabtaa inaad barato sida loo helo deeq waxbarasho oo loogu talagalay barashada fiqiga ee Kuuriya? Boostadaani kaliya kama jawaabeyso su'aashan laakiin sidoo kale waxay sii socotaa inay kugu hagto sida aad u heli karto mid si buuxda loo maalgeliyo ama qayb ahaan la maalgeliyo deeq waxbarasho si loogu barto fiqiga Koonfurta Kuuriya.
Fiqigu waa edeb tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib ah ugu kasbanaya adduunka oo dhan maxaa yeelay wuxuu ka jawaabayaa su'aalo badan oo la xiriira ilaahnimada iyo diinta kiristaanka. Diinta, sida kuwa kale oo badan, waxaa hareeyay su'aalo kala duwan iyo jahwareer ay fiqigu si cad u qeexday si ka fudud.
Sidaa darteed, dad badan oo khuseeya ama ku xiran diinta kiristaanka waxay sii wataan barashada cilmiga diinta oo markii dambe waxay noqonayaan wasiirrada kaniisadaha, shaqaalaha bulshada, ururada samafalka / aasaaska, wadaaddada katooliga, adeegayaasha, iwm.
Koonfurta Kuuriya maahan dad diin badan laakiin wali waxay maareeyaan inay bixiyaan barnaamijyo fiqi ahaaneed, dhab ahaantii, waxaa jira jaamacado iyo kulleejyo loogu talagalay barashada fiqiga. Machadyadan fiqi ahaaneed waxay si siman u oggolaadaan ardayda dhammaan qaybaha nolosha inay ku amraan barashadeeda fiqi ahaaneed.
Si kastaba ha noqotee, sida arday caalami ah oo u imanaya Kuuriya markii ugu horreysay luuqaddu waxay noqon doontaa arrin haddii aadan horay u baran luqadda kahor, haddii kale, taasi waxay noqon doontaa caqabad. Luqadda ugu weyn halkan ma aha Ingiriis laakiin qaar ka mid ah machadyadan fiqiga ah waxay leeyihiin fasalo ay ku leeyihiin luqadda maxalliga ah iyo sidoo kale Ingiriisiga.
Intaad ku guda jirto baaritaankaaga la xiriir hay'addaada martida loo yahay weydiiso haddii ay ku bixiyaan fasalo luuqadda Ingiriiska ah, waa inaad tan sameysaa ka hor intaadan dalban oggolaanshaha. Laakiin hadaad horey u taqaanay luuqada markaa uma baahnid.
Deeqda waxbarasho ee fiqi ahaaneed ee Kuuriya ee ku taxan qodobkan waxaa loogu talagalay arday kasta oo gudaha iyo kuwa caalamiga ahba.
Iyada oo sharaxaadda kor ku xusan, aan sii wadno inaan ogaanno deeqda waxbarasho ee fiqiga ee Kuuriya taasoo laga yaabo, inay, fududeyso, gelitaankaaga.
Deeq waxbarasho oo loogu talagalay Daraasaadka fiqi ahaaneed ee Kuuriya
Deeqdani waxay noqon kartaa mid si buuxda loo maalgeliyo, qayb ahaan la maalgeliyo, deeqo, deeqo, ama noocyo kale oo gargaar lacageed ah. Meel kastoo ay ahaadaanba, weli waa la siiyaa si ay uga caawiyaan xakamaynta khidmadaha waxbarashada waxayna kugu dhiirrigelinayaan inaad noqotid arday wanaagsan.
Deeqaha waxbarasho ayaa kala ah;
Deeqaha Jaamacadda fiqiga ee Seoul
Kuleejka Baabtiisaha Fiqiga ee Jaamacadda Korea
Deeqda waxbarasho ee PUTS
Machadka Caalamiga ah ee Theology (GIT) Deeqaha waxbarasho
Deeqda Dawladda Kuuriya (GKS)
Deeqaha Jaamacadda Qaranka ee Seoul
Barnaamijka deeqda waxbarasho ee Jaamacadda Hanyang
Deeqda Jaamacada Sogang
Jaamacadda Fiqiga ee Seoul waa mid ka mid ah jaamacadaha aan horay u soo sheegay ee sida buuxda ugu heellan barashada fiqiga. Jaamacadu waxay bixisaa barnaamijyo farabadan oo ku saabsan fiqiga waxayna sidoo kale siisaa ilaa daraasad deeqo ardaydeeda caalamiga ah iyo kuwa gudaha.
Deeqdan waxbarasho ayaa loo diyaariyey inay ka caawiso ardayda jecel inay ku socdaan wadada diinta laakiin aan awoodin oo ay siiyaan noocyo kale oo arday ah si ay u dhiirigeliyaan ugana caawiyaan inay si buuxda diiradda u saaraan riyadooda oo ay u horumariyaan kartidooda.
Waxaa jira deeqo waxbarasho oo laga helo STU noocyada soo socda ee ardayda;
Deeq waxbarasho oo loogu talagalay ardayda cusub ee leh waxqabadka tacliimeed ee wanaagsan
Deeq waxbarasho oo loogu talagalay ardayda leh buundooyin wanaagsan
Deeq waxbarasho oo loogu talagalay saddex walaalo ah
Deeq waxbarasho oo loogu talagalay ardayda sarifka lacagaha qalaad
Deeq waxbarasho oo loogu talagalay halyeeyada
Sarkaalka militariga ah ee ardayda
Deeq waxbarasho oo loogu talagalay tayada mustaqbalka ee STU
Deeq waxbarasho oo loogu talagalay ardayda isdhaafsiga
Deeq waxbarasho ee qoyska kuliyada
Deeq waxbarasho oo loogu talagalay darajooyinka wanaagsan ee waxqabadka wax ku oolka ah ee Major iyo,
Deeq waxbarasho oo loogu talagalay shaqaalaha
Haddii aad ku dhacdo mid ka mid ah qaybaha deeqaha waxbarasho ee kor ku xusan, waxaad heli kartaa deeq waxbarasho oo aad ku amri kartaa daraasadaha fiqi ahaaneed ee ugu sarreeya ee STU adigoon ka walwalin waxbarashada. Shuruudaha u-qalmitaanka ee mid kasta oo ka mid ah deeqaha waxbarasho way ka duwan yihiin, waad arki kartaa iyaga halkan.
Jaamacadda fiqiga Seoul waxay kaa caawisay inay ku siiso deeq waxbarasho oo loogu talagalay barashada fiqi ahaaneed ee Kuuriya, inta soo hartay shaqadu waxay ku jirtaa gacantaada.
Tani waa hay'ad kale oo fiqi ahaaneed oo loogu talagalay daraasadaha fiqiga waxayna sidoo kale bixisaa deeqo waxbarasho oo kala duwan. Jaamacaddani waxay siisaa deeqo waxbarasho ku dhowaad qof kasta oo ka socda dhammaan qaybaha nolosha, waxaa jira deeqo waxbarasho oo loogu talagalay ardayda caalamiga ah, ardayda is-dhaafsiga, ardayda cusub, naafada, halyeeyada, carruurta wadaadka / xaasaskiisa, carruurta macallimiinta / shaqaalaha, iyo dad kale oo badan.
Deeqahaani waa kuwo aad u ballaadhan oo deeqsinimo leh oo inta badan daboolaya kharashka buuxa ama nus bar ah. Haddii aad xiiseyneyso barashada fiqiga ee Kuuriya, waxaad u baahan kartaa inaad ka sii eegto jaamacaddan deeqaha waxbarasho.
Jaamacadu sidoo kale waxay daboolaysaa marti deeqaha waxbarasho ee qaranka in ardaydeedu gacmahooda ku heli karaan oo ay sii xakamayn karaan kharashaadka waxbarashadooda.
Jaamacadda Presbyterian iyo Seminary Fiqi (PUTS) waxay siisaa deeqo waxbarasho oo loogu talagalay barashada fiqiga ee Kuuriya. Jaamacadu sidoo kale waxay ku taalaa Kuuriya ardayda danaynaysa waa inay codsadaan deeqdan waxbarasho oo ay la socdaan codsigooda gelitaanka.
Ardayga la siiyay ogolaanshaha wuxuu xaq u leeyahay a Deeq waxbarasho PUTS oo daboolaya ama $ 15,500 midkiiba MA iyo Th.M. barnaamijyo ama $ 24,000 midkiiba Th.D. guud ahaan waxbarashadaada. Deeqdani waxay daboolaysaa waxbarashada, qolka, iyo tikidhada cuntada ee maalmaha shaqada ee kafateeriyada ardayda.
Machadka Caalamiga ah ee Farshaxanka waa machad ka qalin jabiya luqadda Ingiriisiga ee fiqiga ee ardayda ka baxsan Korea. Hay'addu waxay ku taalaa Xarunta Caalamiga ah ee Yonsei waxayna wax ku baraysaa hoggaamiyeyaasha Masiixiyiinta adduunka ee dalalka soo koraya ee Aasiya, Afrika, iyo Latin Amerika.
Iyada oo taageero laga helayo Kaniisadaha Kuuriya, Kaniisadaha Dunida, iyo Jaamacadda Yonsei, GIT waxay bixisaa 100% deeq waxbarasho oo loogu talagalay waxbarashada, hoyga, iyo kharashka nolosha ee arday kasta. Ku Deeqda waxbarasho ee 'GIT' waa mid ka mid ah deeqaha waxbarasho ee ugu sarreeya ee daraasaadka fiqi ahaaneed ee Kuuriya iyada oo ay ugu wacan tahay iyada oo siisa deeq waxbarasho oo buuxda dhammaan ardaydeeda.
Nasiib darrose, ma jiraan qaar badan oo ka mid ah deeqdan waxbarasho ee loogu talagalay barashada fiqi ahaaneed ee Kuuriya laakiin waxaa jira qaar ka mid ah deeqaha waxbarasho ee guud ee daboolaya dhammaan barnaamijyada. Deeqdan waxbarasho guud ayaa sidoo kale loo isticmaali karaa daraasadaha fiqi ahaaneed ee Kuuriya maadaama ay yihiin dhammaan barnaamijyada.
Hoos waxaa ku yaal qaar ka mid ah deeqdan waxbarasho ee guud ee Kuuriya;
Tani waa taxane deeqo waxbarasho oo kabadan nus dersin tirade ay bixisay dowladda Kuuriya. Deeqdani waa mid deeqsi ah, oo daboolaysa kharashyada waxbarashada, qiimaha duulimaadka, caymiska caafimaadka, gunnada bil kasta, iyo gunnooyinka dejinta.
Deeqdani waxaa loogu talagalay ardayda shahaadada koowaad iyo kuwa qalin jabiya ee ka kala yimid dalal shisheeye iyo Kuuriya sidoo kale. Deeqdani waxay ku hoos qoran tahay deeqda waxbarasho ee fiqiga ee Kuuriya hoosaadkeeda maxaa yeelay dhab ahaantii waad ka faa'iideysan kartaa si aad ugu maalgaliso waxbarashada fiqiga ee Kuuriya.
Maaddaama ay u shaqeyneyso ardayda caalamiga ah iyo kuwa gudaha ah, shahaadada koowaad iyo qalin-jabinta way heli karaan dhammaan ardayda. Waxa kaliya ee aad u baahan tahay inaad sameyso ayaa ah inaad doorato jaamacad Kuuriya ah, kulliyad, ama seminar bixiya barnaamijyo fiqi ahaaneed, codso ogolaansho, ka dibna codso deeqda waxbarasho sidoo kale.
Deeqdani waxay shaqeysaa markaad dooratay barnaamij jaamacad ama jaamacad la aqoonsan yahay oo Kuuriya ah.
Waxa kale oo aad u isticmaali kartaa deeqda waxbarasho ee ay bixiso Jaamacadda Qaranka ee Seoul si aad ugu barato B. A ee fiqiga waxay kaliya u yihiin ardayda dhigata jaamacadda. Deeqdani run ahaantii waa mid guud waxayna xaq u leedahay oo keliya ardayda doonaya inay wax ku bartaan barnaamijka 4-sano ee SNU.
Fiqigu sidoo kale waa barnaamij 4-sano ah ama ka yar xaaladaha qaarkood, hadba kiiska uu noqon karo, waxaad u isticmaali kartaa deeqaha waxbarasho ee ay bixiso jaamacaddan si aad ugu barato fiqiga machadkeeda. Waxaa jira ilaa laba deeqaha waxbarasho ee ay bixiso SNU oo iyagu si buuxda loo maalgeliyey oo daboolaya kharashka waxbarashada, kharashka nolosha, tigidhka duulimaadka, iyo khidmadda tababarka luqadda Kuuriya muddo hal sano ah.
Jaamacadda Hanyang waxay bixisaa barnaamijyo fiqiga ah iyo iyada oo loo marayo deeqaha guud, waxaad ku heli kartaa gacmahaaga mid ka mid ah deeqaha waxbarasho ee si buuxda loo maalgeliyo ama qayb ka mid ah deeqda waxbarasho oo aad ku barato fiqiga jaamacadda adigoon ka walwalin bixinta lacagta waxbarashada.
Jaamacadu waxay leedahay barnaamijyo waxbarasho oo taxane ah oo ardaydu ka faa'iidi karaan, deeqaha waxbarasho ayaa kala ah;
Abaalmarinta Heerka Sare ee Hanyang: Deeqdani waxay dabooli doontaa waxbarashada dadka qaata 70%, 50%, ama 30% iyadoo kuxiran natiijooyinka qiimeynta codsadaha. Deeqdani waxay ka kooban tahay hal semester iyo inaad xaq u yeelatid, waa inaad noqotaa arday caalami ah oo leh shahaadada heerka TOPIK oo leh ugu yaraan GPA ee 3.0
Deeqaha Kuuriya ee Caalamiga ah: Jaamacadda Hanyang waxay taageertaa GKS oo aad ugu adeegsan karto barashada fiqiga ee dugsiga. Si aad xaq ugu yeelatid waa inaad noqotaa arday caalami ah sanadkaaga Sophomore / Junior / Senior oo aad haysato ugu yaraan GPA ee 80 guud ahaan miisaanka 100 iyo heerka TOPIK 4 ama wixii ka sareeya.
TOPIK Deeq waxbarasho: Tani waxaa loogu talagalay arday ajnabi ah oo hadda ku qoran barnaamijka shahaadada oo helay shahaadada TOPIK ka dib gelitaanka. Waad ka faa'iideysan kartaa deeqdan waxbarasho oo ay weheliyaan kuwa kale ee ay jaamacaddu bixiso.
Kuwani waa deeqaha waxbarasho ee ay bixiso Jaamacadda Hanyang oo ardayda ku guuleysata ay u isticmaali karaan inay ku bartaan fiqiga jaamacadda. Shuruudaha barnaamij kasta oo deeq waxbarasho ah ee kor ku xusan way kala duwan yihiin, eeg faahfaahin dheeraad ah halkan.
Jaamacadda Sogang waxay bixisaa barnaamij fiqiga ah waxayna leedahay deeqo waxbarasho oo guud oo aad ugu adeegsan karto barashada fiqiga ee xarunta. Sogang waxay taageertaa afar nooc oo deeq waxbarasho ah kuwaas oo kala ah;
Deeq waxbarasho A: 100% dhimista kharashka waxbarashada
Deeqda B: 75% dhimista kharashka waxbarashada
Deeq waxbarasho C: 50% dhimista kharashka waxbarashada
Deeq waxbarasho D: 25% dhimista kharashka waxbarashada
Kuwa qaata deeqaha waxbarasho way sii wadi karaan deeqdan waxbarasho markay ilaaliyaan shuruudaha GPA ee uu dejiyey dugsigu.
Jaamacadda Sogang sidoo kale waxay taageertaa KGS kaliya haddii aad rabto inaad ku barato fiqiga halkan, waxaad dalban kartaa KGS oo waxaad u isticmaali kartaa Sogang hay'ad marti-gelin ah.
Maaddaama aysan jirin hay'ado badan oo bixiya daraasadaha fiqi ahaaneed ee Kuuriya, waxay xaddiday tirada deeqaha waxbarasho ee aan uga heli karno. Jaamacadaha iyo machadyada kale ee ku taxan qaybta "deeqda waxbarasho guud" waxay bixiyaan daraasado fiqi ahaaneed waxayna sidoo kale bixiyaan deeqo guud oo ardaydu u isticmaali karaan inay ku bartaan fiqiga ee hay'adaha kala duwan waana sababta ay halkan ugu liisteen.
Si kastaba ha noqotee, ku dadaal inaad sameyso cilmi-baaris dheeraad ah oo hubi in hay'adda aad doorbideyso ay bixiso daraasado fiqi ahaaneed tani waxay ku lug yeelan kartaa si toos ah ula xiriirista sarkaalka aqbalaadda iskuulka. Xidhiidhada si loo helo macluumaad dheeraad ah iyo sidoo kale in la dalbado ayaa si cad loogu bixiyay mid kasta oo ka mid ah barnaamijyada deeqaha waxbarasho.
Si taxaddar leh u aqri oo ha isku darin maxaa yeelay natiijada ayaa door weyn ka ciyaari doonta go'aaminta mustaqbalkaaga. Sidoo kale, ka feejignow gelitaanka kale oo waxaa jira dhowr siyaabood oo aad ku sameyn karto taas oo haddii aadan sameynin, hoos ka eeg siyaabaha qaarkood;
Kala hadal waalidiintaada xiisaha aad u leedahay barashada fiqiga ee Kuuriya iyo sida helitaanka deeq waxbarasho ay door wanaagsan uga qaadan karto. La socodsiinta iyaga ayaa u oggolaan doonta iyaga inay dhegaha kaa furaan oo ay sidoo kale la xiriiraan shabakaddooda asxaabta ee ku saabsan arrinta oo inyar yar oo xal ah ay halkaa ka soo baxaan.
Dariiqo kale ayaa ah inaad kala hadasho hoggaamiyaha kaniisaddaada ku saabsan barashada cilmiga fiqiga ee Kuuriya, hoggaamiyaha kaniisaddu wuxuu u sii wadi karaa inuu la hadlo xubnaha kaniisadda ee doonaya inay maalgeliyaan waxbarashadaada ama ay ku siiyaan macluumaad ku saabsan sida aad ku heli karto deeqda waxbarasho ee Kuuriya fiqiga.
Haddii aad ku jirto dugsiga sare, markaa kala hadal macallimiintaada iyo maamulahaaga ama madaxa dugsiga / sayidkaaga arrinta. Dadkani badiyaa waxay leeyihiin shabakad ballaadhan oo xiriir ah oo si fudud kaaga caawin doonta inaad arrinta ku faafiso dadka kale.
Sii wad sameynta baaritaanka webka iyo la xiriir dugsiyada wixii faahfaahin dheeraad ah.
Adoo adeegsanaya qaababkan, waxaa jira fursado sare oo aad kuheli karto natiijo wax ku ool ah oo aad ku heli karto deeq waxbarasho oo loogu talagalay barashada fiqiga ee Kuuriya.
Waxaad sidoo kale fiirin kartaa talooyinka deeqaha kale ee hoose;
13 Deeqaha Sare ee Imaaraadka ee loogu talagalay dadka ajaanibta ah
15 Deeq waxbarasho oo si buuxda loo maalgaliyo ee loogu talagalay Ardayda Caalamiga ah ee Yurub
Dibedda Ku Baro Iyada oo Deeq waxbarasho la siinayo Talooyinka deeqaha waxbarasho Barashada Hagaha Dibadda
deeq waxbarasho oo loogu talagalay barashada fiqiga ee Kuuriya
Previous Post:10 Deeqaha Dawlada ee Dibedda Lagu Barto Iyadoo Codsi Bilaash ah
Post Next:15 Koorsooyinka Tababarka Dayactirka Taleefanka Gacanta ee Bilaashka ah
Aklilu Zawga wuxuu leeyahay,
January 6, 2022 at 2: 11 pm
Walaalayaal Masiixa! kuwa halkan ka shaqeeya, salaamu calaykum galabta! Waxaan ahay Aklilu Zawga oo ka yimid Itoobiya. Waxa aan magan u ahay siyaasad ahaan cunsuriyad, aniga oo arrintan ka duulaya, waxaan ku noolahay meel ka fog meesha aan ku dhashay, ilaa hadda xaaskayga iyo labadayda carruur ah waxay ku dhibtoonayaan inay cunaan saddex jeer maalintii. Ilaahay wuu garanayaa qalbigeyga, xataa soo jiidashada weligii ma aan diyaarin cunto gaar ah, tani waa run! Laakiin noloshayda adag Ilaahay wuxuu iigu yeedhay inaan ugu adeego adeegaha caalamiga ah, laakiin si aan naftayda ugu diyaariyo hawshan weyn, ugu horrayn waa inaan Kitaabka Quduuska ah ka barto machad laga yaqaanno waddankeyga hooyo ama kulliyad fiqi oo caalami ah sida deeq waxbarasho. Laakin in aan wax ku barto dalkayga, ama in aan fududeeyo shuruudaha aasaasiga ah ee deeqaha waxbarasho, sida aan kor kuugu sheegay waxyaabo aniga ilama fiicna.
Haddaba arrimahan ku saabsan waxaan idinka codsan lahaa taageeradan hoos ku qoran:-
1, Haddii ay suurtogal tahay adiga, fadlan ku dhawaaq deeqda waxbarasho ee heerka kaniisaddaada ama hel deeq waxbarasho oo fiqi ahaaneed oo si buuxda loo maalgeliyo ee Kuuriya sida lammaanahayga!
2, Ama ii hel deeq waxbarasho oo si buuxda loo maalgeliyo, Sababtoo ah afartii sano ee la soo dhaafay waxaan dhibsanayaa inaan helo deeq waxbarasho oo si buuxda loo maalgeliyo, laakiin weli ma helin dhammaan qof raba inuu igu taageero walaal Masiixi ah!!!!!
December 28, 2021 at 7: am 22
Walaalayaal Masiixa! yaa halkan ka shaqeeya, saaka asalaamu calaykum. Waxaan ahay Aklilu Zawga oo ka yimid Itoobiya. Ilaahay waxa uu iigu yeedhay in aan ugu adeego adeegaha caalamiga ah, laakiin si aan naftayda ugu diyaargaroobo hawshan weyn, ugu horreyn waa in aan Kitaabka Quduuska ah ka barto machad caan ah oo ku yaal waddankeyga hooyo ama kulliyad caalami ah oo fiqi ah oo deeq waxbarasho ah. Laakiin si aan wax ugu barto waddankeyga, ama si aan u fududeeyo shuruudaha aasaasiga ah ee deeqaha waxbarasho, arrimuhu aniga ilama fiicna.
Haddaba, arrimahan ku saabsan waxaan jeclaan lahaa inaan idin weydiiyo taageerada soo socota:-
1, In aan ka walwalo lacagta codsigayga ee haddii aan wax ka weydiiyo machadkaaga.
2, Si loo bixiyo fursad deeq waxbarasho oo buuxda. Haddii kale fursadda ma isticmaali karo xitaa waxaan helay deeq waxbarasho, sababtoo ah waxaan ahay faqri iyo sidoo kale qoyskeyga okay?
Waxa kale oo aan kuu sheego ama aan kashifo sirtayda waa, kaliya maahan tan 4-tii sano ee la soo dhaafay, waxaan raadinayaa deeq waxbarasho oo fiqi ah, waligeyna ma helin qof rabitaan ruuxi ah u qaba caawinta masaakiinta aragtidiisa, Aan i daa Waxaan kuu sheegayaa, waxaan waydiistay deeq waxbarasho machadkan soo socda ee USA
1, Ururka bible college
2, Ohio Christian University Labadan machad waxaan ku qarash gareeyay waqti dheeri ah / qiyaastii 4 sano / laakiin ku saabsan welwelka lacagta gabi ahaanba ima taageeri karaan, Sababtoo ah waxaan u maleynayaa in waqtiga aan hadda ku nool nahay labadaba kaniisadda ama ganacsiga caalamiga ah. ! Marka fadlan waxaa laga yaabaa inaad hal qof taageerto xitaa aadan haysanin 100% barnaamij gargaar ah okay?
Weliba walaalkay kaniisadda aan hadda u adeegayo waa miskiin, fadlan i caawi haddii Ilaahay qalbigaaga ku taabto riyadayda, sababtoo ah dadaalkani maaha mid cilmaani ah, laakiin waa shaqo boqortooyo Ilaah oo wada socda okay? Haddii aan helo fursadan weyn, waxaan ku heli karaa kharashyada duulimaadka anigoo tuugsanaya kaniisad kasta oo nagu hareeraysan heerka ururka. Markaa u jawaab haddii aad hayso jawaab +ve ama -ve, hana ka waaban inaad runta sheegto!
December 28, 2021 at 7: am 15
Walaalayaal Masiixa! yaa halkan ka shaqeeya, saaka asalaamu calaykum. Waxaan ahay Aklilu Zawga oo ka yimid Itoobiya. Ilaahay waxa uu iigu yeedhay in aan ugu adeego hawl caalami ah, balse si aan isu diyaariyo hammigan weyn, ugu horayn waa in aan kitaabka Baybalka ka barto machad laga yaqaano dalkaygii ama kulliyad fiqi oo caalami ah oo aan deeq waxbarasho ka helay. Laakiin si aan wax ugu barto waddankeyga, ama si aan u fududeeyo shuruudaha aasaasiga ah ee deeqaha waxbarasho, arrimuhu aniga ilama fiicna.
Waxa kale oo aan kuu sheego ama aan kashifo sirtayda waa, kaliya maahan tan 4-tii sano ee la soo dhaafay, waxaan raadinayaa deeq waxbarasho oo fiqi ah, waligeyna ma helin qof rabitaan ruuxi ah u qaba caawinta masaakiinta aragtidiisa, Aan i daa Waxaan kuu sheegayaa, waxaan waydiistay deeq waxbarasho machadkan soo socda ee ka socda wadankaaga hooyo ee USA
Joel Ejimofor David wuxuu leeyahay,
August 18, 2021 at 7: am 36
Waxaan u baahanahay deeq waxbarasho oo buuxda si aan u barto cilmiga fiqiga (shahaadada koowaad) ee Jaamacadda Qaranka ee Seoul, ee Jamhuuriyadda Koonfurta Kuuriya?